| အခမဲ့များအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲစိတ်ထဲ APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » စိတ်ထဲအားကစားပြိုင်ပွဲ
စိတ်ထဲအားကစားပြိုင်ပွဲ APK ကို
စိတ်ကိုဂိမ်းများကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ကိုကူညီသိမြင်မှုလုပ်ငန်းများကိုကနေဆင်းသက်လာအခြေခံမူအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြေစိုက်ဂိမ်းမှာများစွာသောစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီ app (သင်3ကြိမ် play နှင့်ပိုပြီးကစားရန်အဆင့်မြှင့်တင်မလိုအပ်ဖို့ခွင့်ပြုအချို့သောအရာ၏) Mindware ရဲ့ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းဂိမ်းနီးပါး3တစ်ဒါဇင်ပါဝင်သည်။ အားလုံးဂိမ်းများကိုသင့်ရဲ့ရမှတ်သမိုင်းနှင့်သင့်တိုးတက်မှုကို၏ဂရပ်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါဂိမ်းစာရင်းထဲမှာဂိမ်းအားလုံးအပေါ်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ရမှတ်များ၏အကျဉ်းချုပ်ပြသထားတယ်။ သငျသညျအလုပျလိုအပ်ပါတယ်နှင့် excel ရှိရာသင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်အောင်စံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကနေတချို့အခြေခံမူကိုသုံးပြီး, သင့်ရမှတ်ကိုလည်းနှိုင်းယှဉ်စကေးကူးပြောင်းနေကြသည်။ သင်တို့သည်လည်း history.Mind ဂိမ်းများကို iPhone / iPad နဲ့ Window များပေါ်တွင်ယခုအခါကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်ရမှတ်အားဖြင့်သင်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်တွေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသတိထားမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရရှိနိုင်ဘာသာစကားများ: အင်္ဂလိပ်, ပေါ်တူဂီ, စပိန်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, အာရဗီ, ရုရှား, ဂျပန်။
ဂိမ်းများနှင့် Theorized စှမျးဆောငျနိုငျ၏ဖော်ပြချက်:
abstraction - လျင်မြန်စွာစိတ္တဇအဓိပ္ပာယ်ကို vs. ကွန်ကရစ်တွေနဲ့စကားများအကြားခွဲခြားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။
အာရုံစူးစိုက်မှုသင်တန်းဂိမ်း - သင့်အာရုံကိုတငျပွပါ။ အဆိုပါ Flanker အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းကိုလျစ်လျူရှုရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုကျင့်သုံးပါ။
မျှော်လင့် - မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်လျှင်မြန်စွာတုံ့ပြန်သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလေ့ကငျြ့။
ဦးတည်ပြောင်းခြင်း - သင့်အာရုံကို, အာရုံစူးစိုက်မှု, အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လေ့ကငျြ့။
အပိုင်းပိုင်းခွဲအာရုံစိုကျငါ - သင့်အာရုံကိုဝေယူနှင့်လျှင်မြန်စွာတုံ့ပြန်သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလေ့ကငျြ့။
မျက်နှာမှတ်ဉာဏ် - မျက်နှာများ၏အုပ်စုတစုအလွတ်ကျက်ပြီးတော့သူတို့ကိုသင်မှတ်မိနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါ။
သင်္ချာစတား - အသေးစိတ်ရန်သင့်အခြေခံဂဏန်းသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှု, အမြန်နှုန်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်လေ့ကငျြ့။
memory ပြိုင်ကားသမား - သင့်ဦးနှောက်ရဲ့အလုပ်လုပ် memory နဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းအဘို့အလေ့အကျင့်။
မှတ်ဉာဏ် Span - သင့်ကိုချက်ချင်းမှတ်ဉာဏ်၏သက်တမ်းတိုးမြှင့်ဖို့သင့်ရဲ့နှုတ်နှင့် nonverbal အလုပ်လုပ်မှတ်ဥာဏ်လေ့ကငျြ့။
မှတ်ဉာဏ် Flow - ဖြစ်ရပ်များ၏စီးဆင်းမှုအဘို့သင့်အမြင်အာရုံနှင့်အနှုတ်မှတ်ဉာဏ်လေ့ကငျြ့။
မှတ်ဉာဏ်ပွဲစဉ် - ပြီးစီးခဲ့တာဝန်များကိုအဘို့သင့်မှတ်ဥာဏ်လေ့ကငျြ့။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအုပ်စုများ - သင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်အမြန်အမျိုးအစားကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကငျြ့။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Flex ကို - သင့်မှတ်ဥာဏ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သတင်းအချက်အလက်ကိုလျစ်လျူရှုနိုင်စွမ်းလေ့ကငျြ့။
Path ကိုမှတ်ဉာဏ် - လမ်းခရီးအလွတ်ကျက်ခြင်းနှင့်မျိုးပွားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုလေ့ကငျြ့။
serial မှတ်ဉာဏ် - သင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့အနည်းငယ်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက် 10 နံပါတ်များနှင့်မျက်နှာများတဲ့စီးရီးလေ့လာပါ။
self-မိန့်ထုတ်္တုများအတွက်သင်ယူခြင်း - သင်ဆုံးဖြတ်ရန်တစ် sequence ကိုသုံးပြီးအရာဝတ္ထုတစ်ခု sequence ကိုအလွတ်ကျက်။
တူညီအပြိုင်အဆိုင်နယ်ချဲ့နေမှုကို - စကားလုံးဆက်ဆံရေးသင့်ရဲ့အသိပညာတငျပွပါ။
Spatial မှတ်ဉာဏ် - အုပ်ကြွပ်၏တိုးပွားလာနံပါတ်များနှင့်အတူကျော်လှန်သောအုပ်ကြွပ်၏တည်နေရာများကိုအလွတ်ကျက်။
မြန်နှုန်းအသေးအဖွဲ - ယေဘုယျ trivia နှင့်သတင်းအချက်အလက်သင့်ရဲ့အသိပညာတငျပွပါ။
နှုတ်ဖြင့် Concepts - လျင်မြန်စွာအယူအဆအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။
ဝေါဟာရစတား - သင့်ဝေါဟာရနှင့်စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ပါ။
ဝေါဟာရရဲ့ Power - တစ်ဦးကို un-အချိန်ကျော်လွန်သွားမျိုးစုံရွေးချယ်မှုဝေါဟာရတာဝန်။
Visual မှတ်ဥာဏ် - စမ်းသပ်မှုနှင့်သင့်အမြင်အာရုံမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်များကိုကျင့်သုံးပါ။
သမ်မာကမျြးမှတ်ဉာဏ် - 30 စကားလုံးများကိုအလွတ်ကျက်သင်ကသူတို့ကိုမှတ်မိနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါ။
စိတ်ထဲအားကစားပြိုင်ပွဲဖျော်ဖြေရေးစိန်ခေါ်ဦးနှောက်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသည်။ အဘယ်သူမျှမသုတေသနလုပ်ငန်းသေးဒီ app ကိုသိမြင်မှုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
subscriptions ကိုအတူ Fixed ကိစ္စများ 3.0.6 ။
3.0.5 Misc ။ ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်မွမ်းမံမှုများ။
ဂိမ်း timer နေရာမှာအဆင်းကို 3.0.3 တိုးတက်မှု။
ဒီလွှတ်ပေးရန်အတွက် 3.0.1 Code ကိုထိန်းသိမ်း။
2.9.9 စွမ်းရည်မြှင့်: App ကို performance ကိုယခုကပင် သာ. ကောင်း၏။ စတင်အသုံးပြုခြင်းယခုပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
2.9.7 မိုင်းနားကိစ္စများ fixed ။
2.9.5 စွမ်းရည်မြှင့်: fixed အသစ်သောဘာသာစကားများနှင့်အသေးစားကိစ္စများ၏အပိုဆောင်း။
2.9.4 အမှတ်ပေးဒေတာဒီလွှတ်ပေးရန်အတွက်အားလုံးဂိမ်း updated ခဲ့သည်။ ခံစားကြည့်ပါ!
14.95 ကို MB
Mindware Consulting, Inc မှ